Microsoft bixin doonaa Windows 10 for free ee July - Rule News
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Microsoft bixin doonaa Windows 10 for free ee July” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo theguardian.com on Monday 1-dii June 2015 09.13 UTC
Windows 10 la sii dayn doono sida update a free on 29 July, Microsoft ayaa ku dhawaaqday.
Waxa ay noqon doontaa in la sii daayo la soo dhaafay weyn ee nidaamka 29-sano jirka ah ee qalliinka ka hor inta Microsoft badalato si nidaam "Windows sida adeeg", oo waxaa weeyaan updates la soo giringiriyey soo baxay markii diyaar.
Tani waxay ka dhigan isbedel ku model ganacsiga Microsoft ee. nidaamka qalliinka waxaa la siin doonaa sida hagaajinta lacag la'aan ah dadka isticmaala Windows 7 iyo Windows 8.1 sanadka ugu horeeya gudahood.
version kasta oo ka Windows ayaa kor qiimaha £ 100, inkastoo inta badan ee dadka isticmaala Windows heli versions cusub ee nidaamka qalliinka marka aad gadaneyso computer cusub, oo aan lagu casriyeeyo software ee naftooda.
Microsoft Windows dhigay 8.1, kaas oo dib loo soo celiyo menu Start, sida update ah si xor ah u Windows 8. Windows 10 soo celin doonaa xubno dheeraad ah oo la yaqaan ka Windows 7 oo iyaga isku fiirin casriga ah ee Windows 8.1.
In ka badan 4 milyan oo qof ayaa beta jirrabaya eegis guud ee Windows 10 labo Bilihii la soo dhaafay, caawinta Microsoft xaliyo dhibaatooyinka ka hor inta sii daayo. Warar dhawaan ayaa tilmaamaya in Windows 10 waa ka fog tahay diyaar, la cayayaanka badan oo kala carar weli la go'an.
Dejinta taariikh daayo caawin kara dardar wareegga horumarinta, laakiin waxaa muhiim ah in Microsoft ayaa kulan dadweynaha ugu horeysay ee Windows 10 waa adag si looga fogaado in lala barbardhigo kutaan-Madiina, Windows Vista ka 2006.
Microsoft ayaa muddo dheer ku qosleen Internet Explorer lagu beddeli doonaa by Edge on Windows 10, halka nidaamka qalliinka uu ballan qaaday in la mideeyo deegaanka Windows ee Chine iyo adeegyada guud desktop, laptop iyo kiniin kumbiyuutarada iyo sidoo kale casriga ah.
kaaliyaha digital cod-gacanta Microsoft ee, Cortana, ka dhigi doonaa in ay ugu horeysay ka baxsan casriga ah la Windows 10, siidaba Apple ee Siri iyo Hadda Google. Microsoft ayaa dhawaan ku dhawaaqay in Cortana lahaa ayaa sidoo kale la sameeyey diyaar u ah qalabka iPhone iyo Android.
Shirkadda ku salaysan Redmond software baahan yahay Windows 10 inuu noqdo hit a labada macaamiisha iyo ganacsiga ka dib markii dhibaatooyin ku waaninayay ururada si ay kor ka Windows XP ah 14-sano jir ah.
Inkastoo Windows XP isagoo in ka badan sanad ka soo baxay oo taageero, samaynta kombiyuutarada nugul in ay weeraraan by Anonymous, kumanyaalka kun ee kombiyuutarada ayaa weli waxaa socda UK, lugu daro 2,600 kumbiyuutarada loo isticmaalo by NHS Scotland.
59481	9 Qodobka, Kumbiyuutar, Microsoft, News, Samuel Gibbs, Software, Technology, Windows, Windows 10
← Jirka dadku waa ku yaab - laakiin haddana ma laha damaanad Meyeydaan Sidee indhahaaga gacangelin fikirkaaga →